Ihhovisi laseThekwini le-International Panel on Climate Change Working Group II Technical Support Unit likhiqize incwajana ebizwa ngokuthi What I Can do about Climate Change.
Umsebenzi we-Intergovernmental Panel on Climate Change (i-IPCC) usanda kuqapheleka emhlabeni jikelele ngemva kokuphuma kwengxenye yokuqala kwe-Sixth Assessment Report ye-Working Group I.
Ngosizo lwe-Working Group II Technical Support Unit (i-WG TSU II) ehlelwe yi-School of Life Sciences, umbiko we-Working Group II ngemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu uzophuma ngoNhlolanja ngonyaka ozayo.
I-Durban office of the WG TSU II, eyethulwa ngowezi-2018, yeseka uSihlalo Obambisene nomunye wokuqala waseNingizimu Afrika we-IPCC uSolwazi Debra Roberts, okhethwe noSolwazi Hans Otto-Pörtner waseJalimane ukubheka umbiko we-Working Group II. U-Roberts, oyiNhloko Ebambile yoPhiko lwe-Resilient City Initiatives, ufika kulesisikhundla se-IPCC namava, axube ulwazi lwesayensi yomhlaba jikelele nokuqonda isimo sezwe.
U-Roberts uzokwesekwa nguDkt Andrew Okem noDkt Marlies Craig, nabacwaningi abenza iziqu zobudokotela ababili oDkt Michelle North noDkt Nina Hunter, abeza namava ngolwazi abanalo kwezokonga imvelo e-Afrika nasemadolobheni. Sebeke babhala amaphepha ocwaningo emabhukwini ocwaningo anjenge-Earth-Science Reviews ne-Environmental Science and Policy ngokushoda kwababhali babantu kwisayensi yezendawo nemibono yabaNtu ekulweni nokuguquguquka kwesimo sezulu nokubhala kwi-Environmental Research Letters.
Ngowezi-2021, ithimba laligxile ekuhlanganiseni nasekwesekeni ababhali bemibiko yokuhlola kodwa futhi lenze imisebenzi yokusabalalisa ulwazi ebantwini abaningi nalabo abangezona izifundiswa nokukhuthaza ababhali abasha ukuthi baphose esivivaneni emsebenzini we-IPCC.
Umsebenzi omkhulu owenzeke ngowezi-2021 kube wumcimbi wokufinyelela emphakathini, owawuhlose ukufinyelela kwabashaya imithetho, abezindaba nabezemfundo ephakeme. Okokuqala i-IPCC yenza umsebenzi ohleliwe wokufinyelela esifundeni, imicimbi yenziwa ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe ngesiFrentshi nangesiNgisi kanti yakhuluma ngemiyalezo ethinta i-Afrika Imibiko Yekhethelo emithathu yalesisikhathi u-1.5oC wesivuvu emhlabeni, izindawo ezinolwandle nezineqhwa nomhlaba.
Ihhovisi laseThekwini labaneqhaza elimqoka ekudidiyeleni imiyalezo eyayiyisisekelo somsebenzi wokufinyelela emphakathini, lase lihlanganisa incwajana etholakala kule: website.
Omunye umsebenzi omuhle omkhulu kube ngowokwenziwa kwencwajana ethi What I can do about Climate Change, egxile ezintweni ezingenziwa ngabantu baseNingizimu Afrika ngamunye ukunciphisa izinga labo lokungcolisa umhlaba. Lencwajana, enezibonelo zikaMasipala waseThekwini itholakala mahhala kwiwebhusayithi ye-WGII TSU kanti iwusize ebantwini, ezinhlanganweni nasezikhungweni ukuthi zibone izinto ezingazenza ngokuguquguquka kwesimo sezulu.
Ngokuka-Roberts no-Craig, izinto ezinjengalencwajana ziwusizo ekwandiseni ulwazi oludingekayo, nokwenza ngcono kwisayensi nasemphakathi ngokusebenzisa ucwaningo emsebenzini owenziwayo nasenqubweni yokwenza izinto.
‘Sidinga ushintsho ngokushesha ngoba uguquko esilubonayo alukaze lubonakale,’ kusho uSolwazi Roberts. ‘Ludinga isizwe sonke ukuthi sibhukule kanti isizwe senziwe ngabantu. Emkhakheni we-IPCC kugxilwa kakhulu enqubweni nakwabashaya umthetho kodwa sonke sishaya imithetho futhi sithathe izinqumo emakhaya ethu kanti kukulelo zinga lapho sifisa ukuthi abantu babeneqhaza khona.’
‘I-IPCC ibheka izinga likazwelonke kodwa ayizithinti izinto zenqubo, ngakho sizama ukusebenzisa umkhankaso wokufinyelela emphakathini nezinto ezinjengezincwajana ukuvala lesisikhala nokwenza ukuthi kutholakale ulwazi,’ kusho u-Roberts. ‘Ngeke ulindele umphakathi ukuthi usukume uma ungawuniki ulwazi oludingayo ukwenza izinqumo nongalusebenzisa ukubheka umsebenzi owenziwa ngabantu abathatha izinqumo.’
Ilekelelwa ngama-IPCC Special Report, neminye imithombo, incwajana iwumthombo wolwazi olungasiza abantu, ikhuthaze izingxoxo ngokudingeka kwenziwe ukuhlisa izinga lokuguquguquka kwesimo sezulu noma ukusilungisa.
Omunye umsebenzi loluphiko oluwubeke eqhulwini, nakuba bekunezingqinamba ngenxa yemigomo ye-COVID-19, kube wukusebenzisana nososayensi base-Afrika ukwethula umsebenzi we-IPCC ngesikhathi se-climapAfrica IPCC Insight Series ye-German Academic Exchange Service. Ithimba likhulume nabacwaningi abenza iziqu zobudokotela e-Afrika yonkana ngemiphumela yama-AR6 Special Reports amathathu, nangesimo nangezindlela zokwenza izinto kwe-IPCC namathuba akhona kososayensi base-Afrika abancane ukuthi babambe iqhaza.
Ezinyangeni ezizayo lelihhovisi lizoqhubeka nokusiza ngokuphothula umbiko wokubheka umsebenzi we-IPCC Working Group nokudlulisa imiyalezo emqoka ebantwini.